Bokin'i Ezekiela - Ny Baiboly
Toko 1 Fisehoan'Andriamanitra.
Toko 2 Irahin'Andriamanitra ny mpaminany hitondra ny teniny amin'ny vahoakany.
Toko 3 Ny nanirahan'Andriamanitra ny mpaminany.
Toko 4 Mivesatra ny helok'Israely sy Jodà ny mpaminany - Ny mofom-pahoriana - Ny hanina maloto.
Toko 5 Ny loza hanjo an'i Jerosalema.
Toko 6 Sazin'ny fanompoan-tsampy.
Toko 7 Izao no farany - Ny loza safatsiroa.
Toko 8 Ny fanompoan-tsampy tao an-tempoly.
Toko 9 Avahana izay mifikitra amin'Iaveh - Ny mpanompo sampy haringana.
Toko 10 Ny fahitana avy amin'Andriamanitra - Ilaozan'Iaveh ny fitoerany masina - Fanasaziana ny loholona.
Toko 11 Ampanantenaina famonjena ireo vaobabo - Ilaozan'Iaveh ny tanàna - Fahataperan'ny fahitana.
Toko 12 Filazana ny handosiran'i Sedesiasa mpanjaka sy ny mpanaraka azy - Fanoharana manambara ny fandosirana mahamenatra hanjò ny mpanjaka - Fanazavana ny fanoharana - Famantarana ny fahoriana hanjò ny vahoaka - Mirehareha foana ho afaka amin'ny famelezan'Andriamanitra ny vahoaka; efa antomotra ny hahatanteraka an'izany.
Toko 13 Mamely ny mpaminany sandoka.
Toko 14 Ny amin'ny mpanompo sampy manontany amin'ny mpaminany - Tsy hahavonjy ny vahoaka meloka ny fivavahan'ny olo-marina eo afovoany.
Toko 15 Israely, voaloboka tsy mahavokatra.
Toko 16 Ny fahorian'ny vahoakan'Andriamanitra tany am-boalohany - Nangoraka azy Andriamanitra, ka nandray azy ho toy ny vadiny - Ny tsy fahaizany mankasitraka amam-pahoriana lava ankehitriny - Fampodiana azy amin'ny toetrany amam-boninahiny amin'ny ho avy.
Toko 17 Fanetrena sy fanandratana ny taranak'i Davida - Fanoharana ny amin'ny voromahery sy ny hazo sedera sy ny voaloboka - Fampiharana ny fanoharana amin'i Sedesiasa - Fampanantenana ny fanjakan'ny Mesia.
Toko 18 Izay nataon'ny olona avy ihany, no ananany adidy - Ny fanahy izay manota, ho faty; ny fanahy manana ny marina, ho velona - Ny fahamarinan'ny ray, tsy hahavonjy ny zanany ratsy fanahy - Ny faharatsian'ny ray, tsy hahavery ny zanany tsara fanahy - Ny ratsy fanahy mibebaka, hovonjena - Ny marina miala amin'ny fanaovana ny marina, ho very - Famaranana sy fampiharana.
Toko 19 Fitomaniana an'ireo mpanjaka farany amin'i Jodà: Joakaza, Joakima, Joasina, Sedesiasa.
Toko 20 Tsy fahamarinan'ny vahoaka sy fahamarinan'Andriamanitra - Fanontanian'ireo loholona sy ny navalin'ny mpaminany an'izany - Tsy fahamarinan'Israely tany Ejipta, tany an'efitra, teo amin'ny tany Kanaana, tamin'ny andron'ity mpaminany - Kapoka valin'izany - Famindram-po amam-panavaozana.
Toko 21 Ny sabatry ny Tompo, mamely an'i Jerosalema sy Amona - Fanoharana - Fanazavana ny fanoharana - Nabokodonozora any Jerosalema sy any amin'i Amona.
Toko 22 Ny helok'i Jerosalema - Fitarihan-teny - Fahitana indray mijery ny helok'i Jerosalema - Haely any amin'ny firenen-tsamihafa izy - Ny memy fandiovana - Heloky ny mpitarika amam-pitondra.
Toko 23 Samaria sy Jerosalema mpirahavavy samy meloka - Fahotana sy famaizana an'i Samaria - Fahotan'i Jerosalema; famaizana azy, tamin'ny Kaldeana - Famisavisana koa ny helok'izy mirahavavy; famaizana azy ireo.
Toko 24 Fiandohan'ny fanaovana fahirano an'i Jerosalema - Fanoharana manambara ny hiafaran'ny fahirano - Ny nataon'ny mpaminany amin'ny nahafatesan'ny vadiny.
Toko 25 Teny manambara loza hanjo an'i Amona sy Moaba sy Edoma ary ny Filistina.
Toko 26 Ny faharavan'i Tira - Filazana ankapobe ny loza hamelezana an'i Tira - Ny ho mpandresy azy - Hotakotaka vokatr'izany - Filazana indray ny loza hamelezana azy.
Toko 27 Fitomaniana noho ny faharavan'i Tira - Ny voninahitr'i Tira oharina amin'ny sambo tsara tarehy sady mafy - Ny fivarotan'i Tira amin'izao tontolo izao - Fahasimban'ilay sambo mafy.
Toko 28 Teny marin'Andriamanitra mamely ny mpanjakan'i Tira - Ny fiavonavonana - Ny fanasaziana azy - Fitomaniana azy - Teny mahazo an'i Sidona.
Toko 29 Teny marin'Andriamanitra mamely an'i Ejipta - Fanoharana ny amin'ny mamba sy fampiharana an'izany.
Toko 30 Faminaniana mamely an'i Ejipta - Ny loza hanjo azy - Tapaky ny mpanjakan'i Babilona ny sandrin'i Faraona.
Toko 31 Faminaniana mamely an'i Ejipta - Fanoharana amin'ny Sedera.
Toko 32 Fitomaniana an'i Faraona - Fivarinany any amin'ny seoly.
Toko 33 Fiovan'endriky ny faminanian'i Ezekiela - Voatendry ho mpitily eo amin'ny fireneny izy - Tsy tokony hanary toky ny lasan-ko babo, fa hanao izay hahamendrika azy hahazo famonjena, amin'ny fibebahany - Filazana fa afaka Jerosalema - Tsy ho an'izay tafajanona any Palestina ny famonjena - Tsy ampy ny mihaino fotsiny ny faminaniana, fa tokony hanaraka izay asainy hatao.
Toko 34 Ny mpiandry ondry mahatoky, Davida vaovao - Ny hanjo ny mpiandry ondry ratsy fanahy - Andriamanitra mihitsy no hiandraikitra ny fiandrasana ny ondriny; hesoriny hiala ny ratsy amin'ireo - Fahatongavan'ilay Davida vaovao; miadana sy be voninahitra ny fanjakany.
Toko 35 Ny faharavan'i Edoma - Fanamelohana an'i Edoma - Antony voalohany anamelohana azy, ny fahalozany tamin'Israely - Antony faharoa, ny fitsiriritany ny tanin'Israely.
Toko 36 Tafaverina amin'ny taniny Israely - Ny anton'ny famonjen'Andriamanitra azy: ho voninahitry ny anarako, hoy izy - Ny fandrosoan'ny fanjakana vaovao.
Toko 37 Fahitana ny taola-maina nahazo aina, fanazavana ny fahitana - Fanakambanana an'Israely ho fanjakana iray, anjakan'i Davida vaovao.
Toko 38 Ny tafik'i Goga - Fahatongavany eo amin'ny tanin'Israely, ny fahareseny - Fahatezeran'Andriamanitra - Famaizana.
Toko 39 Faharesen'i Goga - Ny babo; ny fandevenana ny maty; ny voninahitr'Iaveh niseho miharihary tamin'ny nataony ho an'ny vahoakany.
Toko 40 Ny tempoly vaovao - Nentina am-panahy ho any Jerosalema ny mpaminany - Ny manda ivelan'ny tempoly - Ny vavahady atsinanana - Ny kianja ivelany - Ireo vavahadin'ny tempoly - Ny latabatra amam-panaka fanaovan-tsorona.
Toko 41 Filazana ny amin'ny tempoly - ny fitoerana masina, ny masina indrindra, ny trano hafa anilany - Ny fandresena azy.
Toko 42 Filazana ny momba ny tempoly.
Toko 43 Tonga ao amin'ny tempoliny indray Iaveh - Ny momban'ny otely.
Toko 44 Ny olona ao amin'ny fitoerana masina - Ny mpanapaka; ny hafa firenena; ny levita; ny mpisorona, ny adidin'izy ireo, ny anjarany.
Toko 45 Ny fanatitra - Zara-tany voatokana ho an'ny tempoly sy ny mpisorona ary ny mpanapaka - Ampahafolon-karena manokana aloan'ny mpino - Ny fombam-pivavahana fanao amin'ny fety.
Toko 46 Ny amin'ny fety sy ny sorona.
Toko 47 Ny Tany-Masina vaovao. Ny rano mivoaka avy ao amin'ny tempoly - Ny faritry ny Tany-Masina vaovao - Fizarana azy amin'ny isam-poko sy ny isam-pianakaviana.
Toko 48 Ny anjara tany ho an'ny fokon'Israely avy, sy ho an'ny Levita - Ny tanàna, ny foko sasany, ny renivohitra.